Cambridge YLE – BSI Learning Academy
Home Posts tagged "Cambridge YLE"
Tag: Cambridge YLE
We would like to introduce you one of our Outstanding BlueSkyians named Chaw Su Thazin. She started learning English asaSecond Language at our Blue Sky International, a.k.a B.S.I Learning Academy in 2014 when she was about9years of age. She has been studying at B.S.I for over…
Admin July 19, 2018 July 15, 2019 Cambridge English Exams, Outstanding Blue Skyians Cambridge English Exams, Cambridge YLE, Cambridge Young Learners, Flyers, KET, Movers, Starters 0
ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အပိုင်း (၃)
အပိုင်း (၁) မှာ ကလေးများရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်အောင် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေအကြောင်းနှင့် အပိုင်း (၂) မှာ Cambridge English: Young Learners စာမေးပွဲများဖြစ်တဲ့ Starters, Movers and Flyers စာအုပ်လေးတွေကို လေ့လာလေ့ကျင့်စေပါက ကလေးများ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား တိုးတက်စေရန် အထောက်အကူပြုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခု အပိုင်း (၃) မှာတော့ KET (Key English Test) နှင့် PET (Preliminary English Test) အကြောင်းကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် အဆင့်ဆင့်အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် Common European Framework of…
Admin June 6, 2018 September 4, 2019 Cambridge English Exams, YLE Cambridge English Exams, Cambridge YLE, KET, PET 0
ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အပိုင်း (၂)
အပိုင်း (၁) မှာ ကလေးများရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်အောင် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေအကြောင်း ဝေမျှပြီးနောက် အခုအပိုင်း (၂) မှာတော့ ကိန်းဘရစ်ခ်ျ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cambridge English: YLE အကြောင်းကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cambridge English: Young Learners မှာ အုပ်စု (၃) ခု ခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ (၁) Starters – အသက် (၆) နှစ် မှ (၇) နှစ် (၂) Movers – အသက် (၈) နှစ် မှ (၉) နှစ် (၃) Flyers –…
Admin June 6, 2018 September 4, 2019 Cambridge English Exams, YLE Cambridge YLE, Cambridge Young Learners, Flyers, Movers, Starters 0